विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार, के के छन् विशेषता ? - Pradesh Dainik
विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार, के के छन् विशेषता ?
काठमाडौं, बैज्ञानिकहरुले विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार पारेका छन् । करिब १२ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार पारिएको हो ।
यो सामग्री साभार गरिएको हो